တစ်ခါတစ်လေ စာတွေလုပ်ရင်း စိတ်တွေညစ်လာတဲ့အခါ ပညာသင်နေတာတွေကိုရပ် ရွာကိုပြန်ပြီး နွားသာကျောင်းချင်တော့တယ်။ ကိုယ့်ရွာမှာသာဆို နေပူထဲအလုပ်လုပ်ရတာကလွဲလို့ စိတ်ဖိစီးစရာ ဘာမျှမရှိဘူး။ ယာထဲကိုင်းထဲသွားလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ရင်း အေးအေးလူလူ နားနေနိုင်တယ်။ လုပ်စရာရှိလည်း နောက်နေ့မှာ သွားလုပ်မပြီးလည်း ဘယ်သူမှ ဖိအားပေးမယ့်သူမရှိဘူး။ ကိုယ့်ယာကိုယ်ကိုင်း ကိုယ့်သဘောကျ လုပ်စမ်းပါ့။ ဒီမှာတော့ ဟုတ်ပါဘူး များလိုက်တဲ့ ဖိအားတွေ။ မနက်အိပ်ယာထကတည်းက စာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကကြီးစိုးနေတော့ ဘယ်သွားသွား လွတ်လပ်တယ်ကိုရှိလှဘူးဗျာ။
ကျုပ်ဆယ်တန်းအောင်ခါစက ရွာကအစ်ကိုတွေက ပြောကြတယ်။ ကြိုးစားနော် တောင်သူများလုပ်မည် စိတ်မကူးနဲ့ ငါတို့ကိုသာကြည့် နေပူစပ်ခါးလုပ်ရတာ ပင်ပန်းတယ်ကွာတဲ့။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ငယ်စိတ်ဆိုတော့ ပညာတွေသင်လိုက်မဟဲ့ ဘွဲ့တွေယူလိုက်မဟဲ့နဲ့ပေါ့။ အသက်လေးလည်းနှစ် ဆယ့်ငါးကျော်လို့ လူကြီးတစ်ပိုင်းထဲရောက်လာတော့ စာတွေသင်ရတာ စိတ်ကုန်ချင်လာတယ်။ ဒီတော့ တောသားပီပီ တောအတွေးတွေက ၀င်လာတယ်။
ရွာကအကိုတွေကိုလည်း ပြောပြချင်သေး နေပူထဲမှာ လုပ်ရတာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပိုင်တယ်ဗျ မလုပ်ချင် လှဲအိပ်နေလိုက် ဘယ်သူမှ လာပြီးဖိအားမပေးဘူးလို့။ စာသင်ရတာက မလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီး နေပြန်ရင်လည်း ကိုယ်ပဲမရမှာဆိုးတဲ့ပူပန်စိတ်ကြီးရယ်၊ ဆရာကငါ့ကိုမေးလို့များ မရရင်ဆိုတဲ့ ပူပန်စိတ်ရယ် ငါအိပ်နေလို့မဖြစ်သေးပါဘူး သူများတွေ စာလုပ်နေကြမှာပဲဆိုတဲ့ ပူပန်စိတ် စတဲ့ပူပန်မှုပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ အိပ်တာလည်း မဖြောင့် စားတာလည်းမဖြောင့် သွားတာလည်း မဖြောင့် အတော်ကိုဆိုးသဗျာလို့ နေပူမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ရွာက ကျုပ်အစ်ကိုတွေကို ပြောပြချင်သဗျာ။
သူတို့တွေဘက်ကကြည့်တော့လည်း ဒီကောင်တွေ ပညာသင်ရတာ အရိပ်ထဲမှာနေပြီး ဖောင်တိန်လေးကိုင် စာလေးရေး သက်သက်သာသာရှိလှမယ်လို့ ထင်ကြမှာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီလိုလုံးဝမထင်လိုက် ကြပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တို့က နေမပူပေမဲ့ ခေါင်းပူတယ်အစ်ကိုတို့ရေ။ အစ်ကိုတို့တစ်တွေနေပူတာက ခမောက်လေးဆောင်းလိုက် ရင်အေးသွားမှာ။ ချောင်းရိုးထဲဆင်းပြီး ရေစိမ်လိုက်ရင် အေးမြသွားမှာဗျ။ ဒီမှာခေါင်းပူတာက ဘာနဲ့မှ အေးအောင် လုပ်လို့မရဘူး။ အဲယားကွန်းလည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ တကယ်ဗျာဖြစ်ချင်တာဖြစ် ဆိုပြီးရွာကိုပြန်ပြေးလာလို့ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
ရွာမှာဆို အမေ့ရင်ခွင်မှာလည်း အေးအေးဆေးဆေးနေရသေး။ အမေချက်တဲ့ ဆီပါလေကာ ချဉ်ပေါင်ရေကျဲ ဟင်းနဲ့ ထမင်းမြိန်သေးဗျာ။ ဒါတွေကို အမေ့ပြောပြတော့ အို... ငါ့သားနှယ် စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး အဲ့ဒီလောက် လုပ်မနေနဲ့တဲ့ ငါ့သား တတ်သင့်သလောက်တတ်ထားပြီပဲ တော်ရောပေါ့တဲ့။ အမေ့စကားတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ညည်းလေ့ရှိတဲ့ စကားလေးကိုလည်း သတိရမိသေး...ဘာတဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ ဒါတွေကထားခဲ့ရမှာပါတဲ့။ ဘယ် ပီအိတ်ခ်ျဒီ၊ ဘယ် အမ်အက်စ်စီ ကမှ ကိုယ့်ကို မကယ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ သူပြောတာလည်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်သားပဲဗျ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတစ်နေ့ဆိုတာက ဝေးဝေးလား နီးနီးလား ဆိုတာ မသိတာခက်တယ်လေ။ အဲ့ဒီတစ်နေ့ ဆိုတာမရောက်ခင် ရပ်တည်ဖို့ကလည်း ရှိသေးသကိုး။
ဘာမှကိုမသိတော့ပါဘူးဗျာ...။ သိတာတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရွာကိုပြန် ရသမျှလေးနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပြီး ပူပန်မှုကင်းကင်းနဲ့ အမေ့အိမ်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်တာပဲသိတော့တယ်။ စာတွေလည်း လုပ်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အခုအသက်အရွယ်ထိ လုပ်လာခဲ့တဲ့ စာတွေ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း လုပ်နေရအုံးမှာပဲ ပြီးတယ်လို့လည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အညာကိုပြန်ပြီး စာဥတို့၊ ခင်နှောင်းတို့၊ လုံးတင်တို့၊ ဖိုးတုတ်တို့၊ သံချောင်းတို့နဲ့ ယာထွန်၊ ပျိုးနှုတ်၊ ပေါင်းသင်မြေဆွ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နောက်ပြောင်ကြရင်း အပူအပင်ကင်းတဲ့ အညာသားဘ၀ ကိုပဲ ပြန်လိုချင်တော့တယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ငါတော့ ခေါင်းတွေပူလွန်းလို့ ရူးချင်နေပြီကွာ....။ မင်းတို့ကိုလည်း သိပ်ပြီး သတိရတာပဲ။
စိတ်ဖိစီးမှု့များကြောင့် ထွက်ပေါက်တခုအနေဖြင့် ရေးချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျုပ်ရွှေညာသားလေး၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးစိတ်ကူး များသာဖြစ်ပါသည်။ မည်သူ့ကိုမျှမရည်ရွယ်ပါ။ လာလည်သည့်အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါသည်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, November 10, 20120comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, October 31, 20120comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, August 24, 2012 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီတပတ်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ရွှေညာသားလေး ရွာကိုခဏပြန်ဖြစ်တယ်။ ခဏဆို တကယ့်ကိုခဏပါပဲ။ ညရောက် မနက်ပြန်ပဲ။ ဆွေမျိုးတွေအိမ်တောင် စေ့အောင်မလည်ခဲ့ရပါဘူး။ ဦးကြီး ဒွေးလေးတွေက မင်းဟာ လာတဲ့အခါလေးများ အေးအေးဆေးဆေးတော့နေပါအုံးပေါ့တဲ့။ သူတို့တွေကတော့ သူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဆိုသလိုပဲလေ ကိုယ်ကအဲ့လိုနေလို့ရအောင် လွတ်လပ်တာမှမဟုတ်တာနော်။ ဒီလိုပဲ သူတို့ကို နားလည်အောင်ပြောပြပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေညာသားလေးတို့ ရွာမှာ တောင်သူလယ်သမား အများစုနေထိုင်တာဆိုတော့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းက သူတို့တွေအတွက် အရေးပါလှတယ်။ မိရိုးဖလာ လုပ်ကိုင်စားသောက်လာတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတော့လည်း ပင်ပမ်းပေမဲ့ လုပ်စားနေကြရတာပါပဲ။ ဒီကြားထဲမှာ မိုးလေ၀သက မမှန်တော့ ပင်ပမ်းရကျိုးမနပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုနှစ်ဆိုလည်း မိုးက အတော်လေး ခေါင်တာ။ အရင်နှစ်တွေက ဒီအချိန်ဆို လယ်တွေစိုက်နေပြီတဲ့။ အခုနှစ်တော့ လယ်စိုက်ဖို့ဝေးလို့ ပျိုးထောင်တာတောင် အပင်မပေါက်နိုင်ဘူးတဲ့လေ။ သူတို့တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေကို ကြားရတော့လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ရွှေညာသားလေးလည်း ဒီဘ၀တွေကိုဖြတ်သန်းလာရတာဆိုတော့ သူတို့ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်တယ်လေ။ ရွှေညာသားလေး ရွာမှတုန်းက အခုလိုမိုးဦးကျနောက်ကျတဲ့ နှစ်ဆိုရင် ရွာအနောက်ဘက်က တောင်ရိုးတွေပေါ်ကို ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ နွားစာရှာခဲ့ဖူးတယ်။ မိုးခေါင်ပြီဆိုရင် လူစာထက် နွားစာက တော်တော်လေး ခက်ခဲတာ။ လူစာက သူများဆီမှာ ကူးပြီး(ချေး) စားလို့ရသေးတယ်။ နွားစာကျတော့ အဲ့ဒီလိုမရဘူးလေ။
မိုးကောင်းတဲ့နှစ်ဆိုရင်တော့ ၀ါဆိုဝါခေါင်ဆိုရင် ပြောင်းဖူးတွေလည်းပေါ်နေပြီ။ ရွာမြောက်ဘက်က လယ်ကွင်းပြင်မှာလည်း ရေတွေတဖွေးဖွေးနဲ့ ပျိုးနှုတ်ကောက်စိုက် လယ်ထွန် စတဲ့ မိုးတွင်းပန်းချီကားချပ်ကြီးက အသက်ဝင်စွာလှုပ်ရှားနေပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ရွာပြန်တော့ ဒီပန်းချီကားချပ်ကြီးကို မြင်ရမည့်အစား ပတ်ကြားအက်တွေမပျောက်သေးတဲ့ လယ်ကွက်တွေနဲ့ အရွက်တွေခြောက်နေတဲ့ ပြောင်းဖူးခင်းတွေ မိုးမျှော်နေတဲ့ ၀ါဖျော့ဖျော့ စပါးပျိုးခင်းတွေကိုသာ မြင်ခဲ့ရတယ်။
မိုးတိမ်တောင်တွေကတော့ ညနေစောင်းရင် အနောက်တောင်ဆီက တက်တက်လာတာပဲတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ညိုသာညိုတယ် မရွာတဲ့မိုးဖြစ်နေတာ ကြာပြီတဲ့လေ။ တွေ့တဲ့သူကို လယ်တွေစိုက်ရပြီလား၊ နှမ်းခင်းရော ဘယ်နှယ့်နေတုန်း စသဖြင့် မေးကြည့်တော့ လယ်ကတော့ကွာ ဒီနှစ်မျိုးဆုံးလောက်ပါတယ်။ နှမ်းကတော့ မျိုးလေးလောက် ပြန်ရလိမ့်အုံးမလားလို့ပဲ စတဲ့အားမရှိတဲ့အဖြေလေးတွေပေးကြတယ်။ နောက်ပြီးပြောသေးတယ် မင်းတို့ပညာတတ်တွေပဲ ဟန်ကျတယ် ဘယ်တော့မှမိုးမခေါင်ဘူးတဲ့။ မိုးတော့မခေါင်ဘူးပေါ့ဦးလေးရယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ်ဒေသမှာ မိုးခေါင်တယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့။ ရွှေညာသားလေးလည်း တောင်သူလယ်သမားဘ၀က ဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်မို့ ကိုယ်က အဆင်ပြေပြေ စားသောက်နေရပေမဲ့ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်ရပ်ရွာမှာ မိုးလေးဝသမကောင်းဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ၀မ်းသာနိုင်ပါ့မလဲလေ။
ချောင်းထဲကိုရေချိုး ဆင်းရင်း ရွာမြောက်ဘက်က ခြောက်သွေ့နေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေနဲ့ တိမ်တွေခမောက်ဆောင်းနေတဲ့ ပုပ္ပားတောင်ကြီးရဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးပါအုံးမယ်။ ပုပ္ပားတောင်ကြီးလည်း တိမ်တွေ ခမောက်ဆောင်းနေပေမဲ့ မိုးမရွာတော့ဘူး။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ပုပ္ပားတောင်ကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးရဲ့ မိုးလေ၀သအချက်ပြ သင်္ကေတတစ်ခုပါ။ အခုတော့ သူလည်း သူ့တာဝန်ကိုပုံမှန်အတိုင်း ထမ်းဆောင်နေပေမဲ့ မိုးတွေကတော့ ညိုသာညို ပြိုမလာခဲ့ပါဘူး။ မိုးမရွာလို့ စိတ်အားငယ်နေတဲ့ ရွာသူရွာသား ဦးကြီးဦးလေးတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို မြင်ရလို့ ရွှေညာသားလေးလည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ပြီး အလုပ်ဌာနရှိရာဆီသို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မိုးတွေမြန်မြန် ရွာသွန်းပါစေလို့သာ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, August 12, 2012 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မရောက်တာ ကြာလို့ လာရတာလမ်းတွေမှားနေတယ်...။ ဘလော့ခ်လည်း ဖုန်တွေတော်တော်ထူနေလောက်ပြီဗျာ။ ရွှေညာသားလေး သင်တန်းတခုသွားတက်နေရလို့ ဘလော့ခ်နဲ့နှစ်လလောက်အဆက်ပြတ်သွားတယ်။ ရေးချင်တာတွေ ပြောပြချင်တာတွေကလည်း အများကြီးဗျာ။ ဘယ်ကစပြောရမယ်မှန်းမသိဘူး။ အညာအကြောင်းအဓိက ထားရေးတာဆိုတော့ အညာအကြောင်းပြောပြရမလား။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တာတွေပြောရမလား၊ သင်တန်းအတွေ့အကြုံလေးတွေပြန်မျှဝေရမလား စသည့် စသည့် ပြောစရာတွေပေါ့ဗျာ။ အညာမှာတော့ ဒီနှစ်မိုးခေါင်တယ်ဗျာ...ရွာကိုဖုန်းဆက်လို့ ဦးကြီး ဒွေးလေးတွေက ပြောပြတာပါ။ အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ ရွာကိုလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုချိန်အထိ လယ်တွေလည်း မစိုက်ရသေးဘူးတဲ့။ ပြောင်းဖူးဆိုလည်း ဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ နှစ်တိုင်းဒီအချိန်ဆို ပေါတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်လည်း မရှိဘူးပြောတယ်ဗျ။
တောင်သူလယ်သမားဆိုတာကတော့ မိုးလေ၀သကောင်းမှ အဆင်ပြေတာမို့ မိုးမရွာရင် သူတို့လုပ်ငန်းခွင်က အဆင်မပြေဘူးလေ။ အခုချိန်ထိ ပျိုးမထောင်ရသေးဘူးဆိုရင် လယ်တွေစိုက်ရဖို့ကမသေချာတော့ဘူးပေါ့။ ခြောက်ပျိုးထောင်တာကလည်း မိုးမရွာတော့ အပင်ကိုမပေါက်ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါတွေကြားတော့ ဟိုစကားပုံလေးကို သတိရမိတယ်။ ဘာတဲ့ ရေများရာ မိုးရွာ ဆိုတာလေ။ ရွှေညာသားလေး ရန်ကုန်ကို နှစ်လလောက် နေခဲ့တာ ရွာလိုက်တဲ့ မိုး တစ်ရက်မှမပြတ်ဘူးဗျာ။ ကျုပ်တို့အညာမှာများ ရွာလိုက်ရင် တန်းဖိုးရှိတဲ့ မိုးရေတွေပေါ့။ ရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း ကြည့်ရတာ စိမ်စိမ်းစိုစိုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ...။ အညာမြေဘက်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတော့ လယ်ကွက်တွေကြည့်ရတာ ဘာမှမကိုမရှိဘူး။ တကယ့်နွေရာသီအတိုင်းပဲ။ ဘယ်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ယာကွက်တွေပဲ မြင်ရတယ်။
ရန်ကုန်မှာကျတော့လည်း ကောင်းလိုက်တဲ့မိုးက အပြင်ထွက်ရင် ထီးကောက်ကြီးကို ကိုင်သွားရတာ။ ရောက်စကတော့ ထီးကိုင်ကျင့်မရှိတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဗျာ။ နောက်တော့လည်းလူတိုင်းက ထီးကိုင်ပြီး သွားလာနေကြတာမို့ အကျင့်ရသွားတယ်။ အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် ကျန်တာတွေထက် ထီးကိုအရင်ဆုံး လက်ကဆွဲတယ်။ အခု ကျောင်းကို ပြန်ရောက်တော့လည်း ထီးမကိုင်ချင်တော့ဘူး။ အညာမှာက သွားလေရာ ထီးယူစရာမလိုဘူးလေနော့။ ရန်ကုန်မှာကတော့ သွားလေရာမှာ ထီးမပါရင် မိုးအခါမှသိမယ်ဆိုသလိုမျိုးကို ဖြစ်နေပြီ။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ ပို့စ်လေးတွေလည်း ဆက်ပြီးရေးဖြစ်တော့မှာပါ။ လာလည်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ....။
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, August 02, 20122comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေလောကမှာ သားအချစ် မြေးအနှစ် ဆိုပြီးပြောတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးက လူသားတွေလောက် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ ခွေးတွေမှာလည်း အဲ့ဒီလို အဖြစ်မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ။ အဆောင်မှာ ခွေးတွေပေါတာက စပြီးပြောရင်တော့ အရှည်ကြီးပါပဲ။ အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ အကိုဆရာတွေက ကျွေးထားလို့ အဆောင်မှာ ခွေးတွေအများကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒီအထဲကမှ အကိုတစ်ယောက် အစာကျွေးရင် ခေါ်တဲ့ နာမည်တွေကို မှတ်မိနေတာကတော့ လုံးလုံး၊ ကျားမ(ဂျားမ)၊ ဗိုက်ပူမ၊ မိနက် စတဲ့ နာမည်တွေပါပဲ။ ခွေးဆိုပေမဲ့ နာမည်ခေါ်လိုက်ရင် နားလည်တယ်ဗျ။ သူ့နာမည်နဲ့သူ ခေါ်လိုက်ရင်ပြေးလာတာပဲ။
သူကတော့ မြေးလေးတွေနဲ့အတူအိပ်နေတဲ့ ဂျားမအမေ ဗိုက်ပူမပါ
သူတို့တွေထဲက မိနက်ဆိုတဲ့ ခွေးမကြီးက မိုးရာသီမှာ ခွေးကလေး လေးကောင်မွေးတယ်။ အဲ့ဒီလေးကောင်ကလည်း အခု တော်တော်လေးကြီးနေကြပြီပေါ့။ သူတို့ကိုလည်း နာမည်တွေပေးထားသေးတယ်။ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ တစ်ကောင်ကတော့ ဘုတ်ဘုတ် တဲ့။ ခွေးမည်းမလေး အမွေးစုတ်ဖွားလေးနဲ့မို့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘုတ်ဘုတ် ဆိုပြီးခေါ်တာ အခုလည်း ဘုတ်ဘုတ်ဆိုရင် သုတ်သုတ်ပြေးလာတတ်နေပြီဗျ။ ကျန်တဲ့သုံးကတော့ အောင်နက်၊ ကုတ်ကျား(ဂုတ်ကျား)၊ မိနီ၊ အောင်နက် ဆိုပြီး ခေါ်ကြတယ်။ ဘုတ်ဘုတ်ကတော့ အားလုံးထဲမှာ အလည်ဆုံး အသွက်ဆုံးပဲ။ ကျွေးချင်အောင်လည်း တတ်ပါ့ဗျာ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကဆို ဘုတ်ဘုတ်ကို သမီးလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါလည်း နာလည်တာပဲ။ သမီးလို့ခေါ်တဲ့သူကို ပိုပြီးခင်သေးတယ်။ ကျောင်းကပြန်လာရင် အမြီးကို ပြုတ်ကျမတတ် ခါယမ်းပြီး ပြေးကြိုတယ်။ ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့နေရတော့ အဆောင်ရောက်ရင် ယောင်လည်လည်နဲ့ နေရတာပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။ ဘုတ်ဘုတ်တို့တွေ ရှိတော့ သူတို့ကို စလိုက်၊ ရိုက်လိုက်နဲ့ အပျင်းပြေတယ်။
ဒီနှစ်ဆောင်းတွင်းမှာ ကျားမ(ဂျားမ)က ခွေးလေး လေးကောင်မွေးတယ်။ ရွာဘက်မှာ ဆိုရင်တော့ ခွေးလေးကောင် မွေးရင် ခွေးကုတင် လို့ခေါ်တာကြားဖူးတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အမကတစ်ကောင် အထီးကသုံးကောင်ပါတယ်။ ဂျားမက အရင်နှစ်တုန်းက ဗိုက်ပူမမွေးထားတဲ့ ခွေးမလေးပေါ့။ ဒီနှစ်တော့ သူကလည်း ကလေးအမေဖြစ်နေပြီ။ ခွေးလေးတွေ မွေးခါစတုန်းကတော့ အဆောင်နဲ့ဝေးရာမှာပဲ မျက်စေ့ပွင့်တော့ အဆောင်နားကို ရွှေ့ထားပေးလိုက်တာ အခုတော့ ဂျားမကလေးတွေက အခန်းရှေ့မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြပြီ။ ညနေပိုင်းကျောင်းကပြန်ရောက်ရင် သူတို့လေးတွေနဲ့ ဆော့ရတာ အပျင်းပြေတယ်ဗျ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 17, 20123comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မိတ္ထီလာကန်ထဲက အန္တဂူရေလည်ဘုရား ပုံလေးများပါ။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ဖြစ်တော့လည်း တင်ရတာက အဆင်မပြေလို့ မတင်ဖြစ်ဘူး။ စာတွေလည်း ရေးဖြစ်ပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင်အခက်အခဲကြောင့် ပို့စ်အနေနဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး။ အင်တာနက်လိုင်းတွေ မြန်မြန်ကောင်းပါစေလို့သာ ဆုတောင်းနေမိတယ်ဗျာ။ အခုလည်း စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသော အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်....။ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက်လည်း ရွှေညာသားလေးက ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 04, 20124comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, January 03, 20123comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အားလုံးသော အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ရွှေညာသားလေး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ 2012 ခုနှစ် နှစ်သစ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀များကို သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ...။ ယခုလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ...။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, January 01, 2012 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook